Suuqgeynta Baradhada iyo Kordhinta Qiimaha ee Itoobiya - Magazine Nidaamka Baradhada
в Sheekada Guusha, Wararka adduunka, News, Aruurinta keydinta, Injineerinka / Teknolojiyada, Qalabka xirmooyinka
Waxaan sii wadeynaa inaan daabacno agab gaar ah oo ka socda WPC (Congresska Baradhada Adduunka), isagoo ka warramaya abaabulka silsilad wax-soo-saar baradho ah oo hufan oo Afrika ah.
Shirweynaha Baradhada Adduunka waxa uu ka dhici doonaa May 31 ilaa June 3 ee Dublin, Ireland. Munaasabadda ayaa kulmin doonta xirfadlayaal ay ka mid yihiin beeralayda baradhada, jumladleyda, baakadaha, soo dejinta iyo dhoofiyeyaasha labada shinni iyo bakhaarrada.
Toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa suuq-geynta iyo baradhada qiimaha-kordhinta ee Itoobiya.
Waxaa jira abuur kale oo soo saara Yeldu, halkaas oo Guta ku nool yahay, laakiin beertiisa ayaa dad badan u yaqaanaan isha baradhada shinni oo tayo leh.
Wakiilo ka socda hay'adaha dawliga ah, kuwa aan dawliga ahayn (qaran iyo caalami), ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo beeralayda gaarka ah oo ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka ah ayaa u yimaada inay iibsadaan abuur.
Ugu horrayn, Xarunta Baradhada (CIP) waxay ku talinaysaa in iibsadayaashu aadaan Yelda, maaddaama kuwa soo saarayaasha abuurka halkaas ay u hoggaansamaan shuruudaha QDS si ay u soo saaraan abuur tayo leh. Intaa waxa dheer, Holleta waxa uu mar ku xayaysiiyay baradhada shinnida ee Guta iyo beeralay kale oo lagu magacaabo Tesfaye, mareegta Solagrow iyo wargeyska loogu akhriska badan yahay ee The Ethiopian Reporter.
Iibsadayaasha ayaa bilaabay in ay ciwaankiisa u dhiibaan kuwa kale, Guta laftiisu waxa uu ururiyay ciwaanada kuwa wax iibsan kara oo u yeedhay si ay u ogaadaan in uu haysto baradho shinni ah oo iib ah. Sidan oo kale, waxa uu boqolaal tan oo baradho shinni ah ka iibiyey hay’ado aan dowli ahayn oo ay ku jirto World Vision, si ay mashaariic ugu fuliyaan. Sannadkii hore, waxa uu ka iibiyay ilaa 36 tan oo baradho shinni ah oo Gudene ah processor-ka Dutch-ka ah ee Senselet (macnaha "silsilad" ee Amxaariga, luqadda Itoobiya ugu weyn). Guta waxa uu baradhada suuqa ku soo qaadaa baabuurtiisa isaga oo geynaya dukaamada waaweyn ee suuqa dibadda ee ku yaal Addis Ababa. Waxay u fulisaa hawlaha bangiyada saddex siyaabood oo waaweyn: xawilaadda, jeegag iyo lacag caddaan ah.
Guta waxay kaloo iibisaa wax soo saarka caanaha waxayna qalabaysaa kaabayaasha beeraha. Iskuulka iyo mashruuca hoteelka ee uu soo jeedinayo ayaa shaqooyin badan u abuuri doona dadka deegaanka, gaar ahaan dhalinyarada.
Abuuritaanka qiime dheeri ah (baakad, kaydin habboon, gaadiid)
Guta ma iibiso baradhada shinnida xilliga goynta, laakiin waxay ku kordhisaa qiimo iyadoo kaydisa digriiga ilaa ay ka soo saaraan geedo tiro badan, gaaban, cagaar iyo adag oo aan jabin inta lagu jiro gaadiidka iyo beeritaanka. Iibsadayaashu way ogyihiin in baradhada shinnida leh ee leh sprouts badan ay dhaliso wax badan, kamana labalabeeyaan inay bixiyaan wax badan. Waxa uu leeyahay saddex baabuur oo qaada 35 tan, kuwaas oo u sahlaya in uu keeno abuur iyo baradhada, taas oo soo jiidata macaamiil badan.
Tags: suuqgeyntabaakadaha baradhadaItoobiya
Qaabab cusub oo loogu talagalay iibinta alaabada beeraha ayaa laga soo saaray gobolka Novgorod